Ethiopia Airlines oo iska fogeysay in Saanad Militari ay u qaaday Tigray. - Allbanaadir Media
Home Xogta Dahsoon Ethiopia Airlines oo iska fogeysay in Saanad Militari ay u qaaday Tigray.
Ethiopia Airlines oo iska fogeysay in Saanad Militari ay u qaaday Tigray.
Maamulka Shirkadda Ethiopian Airlines ayaa beeniyay in ay daabuleen hub iyo saanad militari oo qayb ka ah hubka loo adeegsaday dagaalka ka dhacay Ismaamulka Tigray ee dhaca Waqooyiga Dalkaas.
Bayaan kasoo baxay Ethiopian Airlines ayaa lagu sheegay in warkaas uu yahay mid xaqiiqda ka fog isla markaana diyaaraddooda ay tahay mid qaada Dadka rayidka ah sida lagu xusay Warka kasoo baxay Shirkadda.
“Diyaaradaha Shirkadda Ethiopia Airlines waxa ay qaadaan dadka rayidka ah, ma jiro duullimaad aaday Gobolka tan iyo markii la xayiray, eedeyntaas waa mid lagu sumcad dilayo Shirkadda” ayaa lagu yiri Bayaanka kasoo baxay Ethiopia Airlines.
Duullaanka Xukuumadda Ra’iisul Wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed ay ku qaaday Ismaamulka Tigray November 2020 waxaa ka dhashay eedeymo kala duwan oo loo jeediyay shaqsiyaad iyo shirkado loo heysto ku lug yeelashada dagaalkaas.
Muran ka dhashay dib u dhigista Doorashooyinka Itoobiya ayaa sababay in Ismaamulka Tigray uu qabsado Doorasho ka madax bannaan Dowladda, balse waxaa tallaabadaas ka carooday Abiy Ahmed oo duullaanka uu ku qaaday u kaashaday Ciidanka Eretareeya.